प्राय धेरैले चिनिरहेका छैनन यो फोटो कसको हो? उनि अहिलेका सुपरस्टार हुन – Eps Sathi
January 27, 2022 907
काठमाडौं। अचेल बलिउड सेलिब्रेटीहरूको बाल्यकालका तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेका छन्। फ्यानहरू पनि आफ्नो मनपर्ने स्टारहरूको बाल्यकाल फोटो हेर्न मन पराउँछन्। यस्तै एउटा तस्विर फेरि एकपटक सामाजिक सञ्जालमा देखा परेको छ, जसलाई मानिसहरुले चिन्न खोजिरहेका छन्। मानिसहरुले अनेकन अड्कल बाजि लगाउँदा समेत धेरै जनाले चिन्न नसकेको यो तस्विर आखिर कसको होला त?
कतिपयले तस्बिर हेरेर सुपरस्टारलाई चिन्न थालेका छन् भने कतिपयले उनलाई अगाडि बढाएर पनि चिन्न सकेका छैनन्। वास्तवमा, एक सुपरस्टारको बाल्यकालको तस्विर इन्टरनेटमा आएको छ, जसमा उनी बिना कपडाको स्टाइलमा पोज दिइरहेका छन्। तस्विरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि एक बच्चाले कपडा बिना धेरै प्यारा स्टाइलमा पोज दिइरहेको छ।
यो बच्चाले कम्मरमा हात राखेर पोज दिइरहेको देखेर मानिसहरु उनको सुन्दरताको तारिफ गर्दा थाकेका छैनन् । आखिर आजको मितिमा सुपरस्टार बनेका यी बालक को हुन् ? अझै पनि चिन्नुभएको छैन भने भन्नुहोस्, यो बच्चा अरु कोहि होइन बलिउडका भाइजान अर्थात् सलमान खान हुन् । हो, यो तस्विर सलमान खानको हो, जसमा उनी निकै क्यूट देखिएका छन् ।
यो तस्विर सार्वजनिक भएपछि मानिसहरुले यसमा कमेन्ट गर्न थालेका छन्। कसैले यो बच्चालाई सञ्जय दत्त भनेका छन् भने कसैले आमिर खान। यो तस्विर सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा समेत अनेकन अड्कल वाजीहरु भइरहेका छन। बलिउडका चलचित्रहरु हेर्ने नेपाली दर्शकहरु धेरै भएकाले पनि यो तस्विरप्रति नेपालीहरुको चासो बढेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर सलमान खानका फ्यानहरूले आफ्नो मनपर्ने स्टारलाई चिन्न थालेका छन्। सलमानको कामको कुरा गर्ने हो भने उनी पछिल्लो पटक ‘एन्टिम’ मा देखिएका थिए। यो फिल्मले बक्स अफिसमा धेरै कमाइ गरेको थियो। उनि बलिउडका सुपरस्टार हुन। विश्वभर उनका फ्यानहरु करोडौंमा छन।
Prevकोरियाबाट फर्केर १० रुपैयाँमै कपडा बेच्ने चिजमानको व्यवसाय, हेरौं कसरी हुँदैछन सफल
Nextकोरियाबाट पठाएको ८० लाख लिएर श्रीमती सम्पर्क बिहिन, श्रीमान कोरियाबाट रुँदै यसो भन्छन (भिडियो)
कोरियामा जन्मदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम हुँदा समेत एउटा शहर जहाँ भटाभट बच्चा जन्मिरहेका छन, यस्तो किन?